Mmetọ mmiri: ihe ọ bụ, ihe kpatara ya na nsonaazụ ya Mmeghari ohuru Green
Mmiri bụ ihe kachasị ọnụ ahịa n'ụwa. Ọ bụ ezie na enwere mineral nke nwere oke akụ na ụba, mmiri dị mkpa maka ndụ na mmepe ya. Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) na -akọwa mmiri mmetọ dị ka nke 'emezigharịrị ihe mejupụtara ya ka ọ ghara iru ọnọdụ maka iji ya eme ihe.' Ndị Mmiri mmetọ ọ bụ otu n'ime nnukwu nsogbu ụmụ mmadụ na -eche ihu.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe mmetọ mmiri bụ, ihe njirimara ya na otu anyị nwere ike isi zere ya.
1 Gịnị bụ mmetọ mmiri
2 Ihe na -ebute mmetọ mmiri
3 Ihe ga -esi na ya pụta na ahụike na gburugburu ebe obibi
4 Otu esi ebelata mmetọ mmiri
Gịnị bụ mmetọ mmiri
Ọ bụ ọnụnọ kemịkal ma ọ bụ ihe ndị ọzọ karịrị nke ọnọdụ eke. Nke ahụ bụ, ọnụnọ nke ihe ndị dị ka microorganisms, ọla dị arọ ma ọ bụ sedimenti. Ihe mmetọ ndị a na -ebelata ịdị mma mmiri. Iji hụ na nchekwa mmiri na ichekwa ahụike, Healthtù Ahụ Ike haswa atụpụtala ntuziaka ịdị mma mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ya:
Ogo microbiological. Iji nyochaa nke a, a ga -eme nyocha microbiological (ọmụmụ nke ụmụ irighiri ihe na -egosi mmerụ ahụ fecal, dị ka ọnụnọ E. coli ma ọ bụ nchoputa nke njupụta pathogen).
Ogo kemịkal. Maka nkwenye ya, a ga -eme nyocha iji nyochaa ọnụnọ nke ihe mgbakwunye, nke sitere na ngwa nri na kemịkal ejiri nweta ma kesaa mmiri.
Ihe omume mmadụ na -emetụta oke mmetọ mmiri. Anyị ga -ahụ n'okpuru ihe bụ isi kpatara ya.
Ihe na -ebute mmetọ mmiri
Ka ọ dị ugbu a, ihe dị ka nde mmadụ ise n'ụwa na -anwụ site na ị drinkingụ mmiri mmetọ, ọnọdụ dị oke njọ n'ihe gbasara mwepu ọha, ịda ogbenye na ịkpa oke ókè. Ndị a bụ isi ihe kpatara ya:
Mmefu ụlọ ọrụ: ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ihe na -ebute mmetọ mmiri. Ọ bụ ihe nwute, ọtụtụ puku ụlọ ọrụ amabeghị na ekwesịrị iji akụ a nke ọma, ha na -ewepụtakwa nnukwu ngwaahịa na -emetọ emetọ site na usoro nrụpụta ha. Osimiri na ọwa mmiri na -emetụtakarị omume ọjọọ ndị a.
Ịbawanye na okpomọkụ: Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, okpomoku zuru ụwa ọnụ na -emetụtakwa mmetọ mmiri. Mgbe okpomọkụ nke gburugburu ebe obibi dị elu karịa ka ọ dị na mbụ, isi mmiri na -ebelata ọdịnaya oxygen, na -akpata mgbanwe na nhazi mmiri.
Iji ọgwụ ahụhụ na -egbu egbu arụ ọrụ ugbo: imirikiti usoro ọrụ ugbo nke oge anyị na -eji fatịlaịza na kemịkal maka ịkọ na imepụta nri. Ọ dị mma, a na -enyocha ngwaahịa ndị a site na ọwa n'okpuruala, n'ọtụtụ oge, ọwa ndị a ga -emesịa banye na netwọkụ mmiri anyị maka oriri. Ọ fọrọ nke nta ka a ghara ịgwọ mmiri a wee laghachi na ọwa dabara maka oriri.
Mgbu osisi: oke osisi nwere ike ime ka osimiri, ọdọ mmiri na isi mmiri ndị ọzọ takọọ. Ọzọkwa, igbukpọsị anụ n'okwu niile anaghị agụnye iwepụ mgbọrọgwụ osisi n'akụkụ mmiri, nke nwere ike ibute nsị na nje bacteria n'okpuru ala wee si otú a merụọ akụ a dị oke ọnụ ahịa.
Mmanụ na -efesaN'ikpeazụ, anyị agaghị echefu omume nke na -ebute mmetọ mmiri n'akụkụ ụwa dị iche iche: mmanụ wụfuru na ihe ndị mepụtara ya. Ihe na -ebute mmiri ndị a bụ ụgbọ njem mmanụ na -adịghị mma na mgbapụta mmanụ ụgbọala na ngwaahịa ndị ọzọ. A na -echekwa ngwaahịa ndị a na tankị nchekwa n'ime ala; N'ọtụtụ ọnọdụ, tank mmiri ga -awụsa na ihe ga -aba n'ime ahụ gbara ya gburugburu, gụnyere isi mmiri dị mma maka oriri mmadụ.
Ihe ga -esi na ya pụta na ahụike na gburugburu ebe obibi
Enwere nsonaazụ ọjọọ dị iche iche nke mmetọ mmiri kpatara gburugburu ụwa. Anyị nwere ike kewaa ihe ndị ahụ n'ime mmadụ na gburugburu ebe obibi. Ka anyị hụ ihe ha bụ:
Ọrịa: Ị linkedụ mmiri ruru unyi ma ọ bụ iji ya maka ịdị ọcha onwe onye na ịdị ọcha gburugburu ebe obibi nwere ọtụtụ ọrịa. Healthtù Ahụ Ike Ụwa na -ekwu maka afọ ọsịsa, ọgbụgbọ ọgbụgba, ịba ọcha n'anya A, ọnyụnyụ ọbara, polio, na ịba ahụ ọkụ. Mgbochi, site n'ịkwalite akụrụngwa ọkọnọ, idebe ihe ọcha na ịdị ọcha onwe onye, ​​na -akwalite iji mmiri dị ọcha maka nri na ịdị ọcha ụlọ.
Ọnwụ: O di nwute, mmiri ruru unyi nwere nnukwu ihe egwu metụtara ya. Dị ka Healthtù Ahụ Ike Ụwa si kwuo, ọrịa afọ ọsịsa na -akpata ọnwụ nde 1,5 kwa afọ. N'ime ha, ihe karịrị 840.000 na -ebute site na enweghị mmiri dị ọcha na ezughi oke ọcha na ịdị ọcha nke onwe. Ihe dị mfe, ihe a na -eme kwa ụbọchị dị ka iji ncha na mmiri were aka gị ma ọ bụ ị drinkingụ iko mmiri dị ọcha nwere ike igbochi mgbasa nke ọrịa ndị nwere ike igbu mmadụ. Enweghị mmiri, ịdị ọcha na ịdị ọcha, a na -etinye ahụike n'ihe egwu. 40% nke ọnwụ na ụmụaka na -ebute site na ị drinkingụ mmiri na -adịghị mma ma ọ bụ enweghị ịdị ọcha na ọnọdụ mberede.
Erighị ihe na -edozi ahụ: erighị ihe na -edozi ahụ metụtara nri ezughi oke yana ọrịa na -efe efe n'ihi njikọ dị n'etiti nri, ahụike na nlekọta. N'ụzọ dị otu a, nri dị mma na -egbo mkpa nri, mana ọ na -achọkwa ọnọdụ zuru oke nke na -enye ọrụ ahụike, akụrụngwa ịdị ọcha na usoro ịdị ọcha zuru oke, nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị mkpa maka ya.
Gburugburu: Enwere nnukwu mmetụta nke ezigbo mmiri na -adịghị mma na gburugburu ebe obibi, ebe ọ na -emetụta ebe obibi na -akpata mfu nke ihe dị iche iche dị n'ime mmiri ma na -eme ka ifuru nke algae na -emerụ ahụ ma ọ bụ eutrophication na -eto.
Otu esi ebelata mmetọ mmiri
Enwere ọtụtụ agwa na omume ọma iji kpochapụ ma ọ bụ belata mmetọ mmiri:
Leba anya na ngwaahịa nhicha ụlọ gị: gbalịa iji ngwaahịa nhicha ụlọ pere mpe yana na ha anaghị emerụ emerụ.
Debe ihe fọdụrụ na ebe ọ dabara: imegharị ihe bụ ihe nwere ike belata mmetọ mmiri site na mkpofu ụlọ.
Họrọ uwe gị nke ọma: jiri ma ọ bụ jigharịa ndị na -anaghị emebi gburugburu.
Tinye aka: Mgbasa ozi afọ ofufo gburugburu ebe obibi na -esonye.
Kọwaara ụmụ gị ndị nwoke na ndị nwanyị ihe mmetọ oke osimiri bụ: agụmakwụkwọ gburugburu ebe obibi bụ igodo ka ọgbọ ọdịnihu nwee ike chekwa gburugburu ebe obibi.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara mmetọ mmiri na ihe niile ọ gụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Mmiri mmetọ
Ihe oriri Heterotrophic